अमेरिकामा रहेका विकास भन्छन् , विपत्तिले सानो ठूलाे देश भन्दैन रहेछ – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/अमेरिकामा रहेका विकास भन्छन् , विपत्तिले सानो ठूलाे देश भन्दैन रहेछ
चैत ४, अमेरिका :प्रकृति र जिन्दगी सधै हामीले सोचे जसरी कहाँ चल्दो रहेछ र ? आजको यो समय विश्वलाई नै चुनौती दिने खालको रहेको छ ।संसार मा धेरै हामी यस्ता मनिस छौ जस्ले दिनभरी काम गरेर विहान बेलुकाको छाक टार्ने काम गर्छौ । अब भन्नुस यस्ता मानिसलाई अहिले कति गार्हो भएको होला ? कोरोना को प्रकोप ले अहिले स‍ंसारभरका हरेक मनिसहरु त्रास पूर्ण जीवन बिताईरहेका छन् ।
म हाल अमेरिका छु र यहाँको जनजीवन मा नि कोरोना ले प्रत्यक्ष असर गरेको छ । यहाँ को बजार व्यवस्थापनमा ठूलो असर गरेको छ, बजार मा धेरै दैनिक उपभोग्य समानहरु कृत्रिम अभाव हुन थालेको छ जसले सम्पूर्ण मा एउटा तनाब सिर्जना गरेको छ ।
यहाँ जिन्दगी भने को नै जागिर भए को ले यो जागिर भएन भने हाम्रो जीवनयापन मा कस्तो असर पर्छ भनेर दिमागमा आईरहन्छ यो त अब सामन्य नै लाग्न थाल्यो । सबै देश भन्दा अगाडी भए नि प्रकोपले अमेरिका भन्दैन । समाधान खोज्न तत्पर रहे नि स‌ंक्रमित को संख्या दिनानुदिन बढेकै छ ।
यहाँ अहिले स्कुल, कलेज, सवै बन्द गरिएको छ गाडीमा नै कोरोनको चेक गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जस्तो सुकै अवस्था आउन सक्छ भनेर म पनि तयारी अवस्थामा बसेको छु । केही कुराको अभाव भए घरघरमा नै खानेकुरा ल्याईदिने कुरा सरकारको छ तर पनि आफु तयारी अवस्थामा त बस्नै पर्यो हैन र ?
यस्तो अवस्थामा हामीले मनमा कुरा खेलाएर आफैलाई कमजोर बनाउनुको साटो आफ्नो तर्फबाट अपनाउन सक्ने सावधानीको बारेमा जोड दिउँ । हल्लाको पछि नलागौ है । स्टे सेफ पिपल ।झापाको कन्काइ नगरपालिका-१ दुर्गापुर स्थायी घर भएका विकाश खत्री हाल परिवारसहित अमेरिकाको टेक्सासमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
नेपालले खेलेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताका सदस्य सुब्बाको निधन
आगामी ३ दिनसम्म वर्ष र हिमपात हुने, यस्तो छ पूर्वानुमान !